Ubuntu Cinnamon, pamwe kuravira kwepamutemo mumwedzi iri kuuya | Linux Vakapindwa muropa
Wakambonzwa here kuti Ubuntu Cinnamon ingangove inovhenekera zviri pamutemo?
Ini ndinofunga iyo Linux blogosphere haisi kutaura nezve izvi zvakakwana. Cinnamon inzvimbo yakajeka iyo yakave yakakurumbira paLinux Mint, imwe yeanonyanya kuzivikanwa Ubuntu-based distributions, asi yakagara iripo pane mamwe masisitimu anoshanda. Nhau dzatinokuunzira nhasi dzakakosha nekuti tiri kutaura nezve inogona kuitika yeUbuntu flavour uye nekuti inoshandisa graphical nharaunda iyo switch inofarira yakawanda. Zita rako, Ubuntu Cinnamon.
Ubuntu Cinnamon chirongwa chechidiki chiri kutora nhanho dzacho dzekutanga, chimwe chinhu chakaitwa nemamwe mabudiro akaita saUbuntu MATE kana Ubuntu munguva pfupi yapfuura. Budgie. Kufanana neyechipiri pamusoro apa, iyo yakatanga saBudgie Remix, chinotevera chikamu chemhuri yeCanonical chiri kushandisa zita rechinguvana rinova Ubuntu Cinnamon Remix. Kana ivo vachikwanisa kutevedzera zvese zvinodiwa nekambani inotungamirwa naMark Shuttleworth inokumbira kwavari, munguva yepakati nepakati ichava yepamutemo Ubuntu flavour nhamba 9.
Ubuntu Cinnamon inodzosera iyo nhamba yepamutemo Ubuntu flavour ku9
Kana panguva ino iwe uchifara kuti iwe uchazokwanisa kushandisa yepamutemo Ubuntu neCinnamon graphical nharaunda, zorora. Kana zvinyorwa zvekutanga zvaendeswa uye zita iro Canonical rinokumbira (nekuda kwenyaya yepamutemo), izvozvi vane basa mberi. Zvinonyanya kukosha ndezvekuratidzira kuUK-based kambani kuti ivo vanokwanisa kugadzira nekuchengetedza mapakeji anodikanwa ehurongwa hwekushandisa hwavanofunga kuburitsa. Kana dzikadaro, Canonical inofambisa tebhu uye ichizopa seyakaviririka yepamutemo. Chikamu chekuvandudza cheUbuntu Cinnamon (Remix) chakakurumidza zvekuti parizvino hapana kana mufananidzo wekumisikidza weiyo inoshanda sisitimu. Muchokwadi, kusvika ku webhusaiti yako Iyo yakanyorwa se "mukuvandudza", saka chinhu chega chatinogona kuita izvozvi kuteedzera chirongwa uye kumirira yekutanga vhezheni vhezheni kuti isunungurwe.
Kune nyowani nyowani kune yeLinux nyika, yepamutemo flavour inotsigirwa neCanonical, asi ivo ndivo vavandudzi (avo vevara) vari ivo vari kutarisira kuchengetedza iyo inoshanda system. Iye murwi mukuru atoziva kuti chichava a Ubuntu mukati ne "Cinnamon" kunze, iyo inosanganisira graphical nharaunda ine mukurumbira nekutarisa zvakanyanya senge Windows uye nekuita kuti zvive nyore kuchinjisa uye Cinnamon kunyorera / sarudzo.
Vagadziri vayo vanoti Ubuntu Cinnamon haingauye kuzobvisa Linux Mint kubva mumutambo. Ichave imwezve inoshanda sisitimu uye kusvika kwayo kuchave kwakanakira iyo graphical nharaunda, izvo zvakare zvinoreva kuti inogona kuve yakanaka kune Linux Mint. Chero zvazvingaitika, tinovashuvira zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Wakambonzwa here kuti Ubuntu Cinnamon ingangove inovhenekera zviri pamutemo?
Joshua Peisach (Ubuntu Cinnamon Mutungamiri) akadaro
Ndatenda! -Joshua Peisach
Pindura kuna Joshua Peisach (Ubuntu Cinnamon Lead)
Zvakanaka ndinofunga. Dzimwe nzira nyowani dzinogara dzakanaka.
Iyo inogara iri yakanaka dzimwe sarudzo
Ini handinyanye kuishandisa kana handidi kuishandisa, asi inokurudzira kuyedza
Microsoft Windows 11 ... neLinux kernel?